jeudi, 02 avril 2020 21:24
Toamasina Ady amin’ny COVID-19: Natomboka ny fizaràna ny VATSY TSINJO
Nanomboka androany hariva alakamisy 02 aprily, tao amin’ny Firaisana Tanambao5, Parcelle 13/82-83, ny fizaràna ny VATSY TSINJO nampanantenain’Andriamatoa Filoha Andry RAJOELINA.
jeudi, 02 avril 2020 16:14
Ny Rado Rafalimanana: Nidoboka eny Antanimora
Taorian'ny famotorana nataon'ny teo anivon'ny Zandarimaria Brigade de Recherche Fiadanana, rehefa nosamborina fa nanakorontana teny amin'ny CCI Ivato i Ny Rado Rafalimanana, ary nisy fitoriana momba azy, resaka fisolokiana, dia natolotra ny fitsarana io maraina ny alakamisy 02 aprily 2020 io izy.
Ny Rado Rafalimanana: Nentina eny amin'ny Brigade de recherche Fiadanana
Tonga teny amin'ny CCI Ivato io maraina io Ny Rado Rafalimanana, nitondra ny zaodahiny avy any an-dafy atao fitiliana Covid-19 eny an-toerana.
mardi, 31 mars 2020 21:39
Toamasina: Amperin'asa tanteraka ny Dispositif CCO COVID-19
Amperin'asa tanteraka ny Dispositif CCO COVID-19 tarihin'Andriamatoa Governoran'ny Faritra RAFIDISON Richard sy ny Prefet n'i Toamasina.
vendredi, 27 mars 2020 12:38
Fianarantsoa: « Misy tranga iray mampiahiahy » hoy Razafindrafito Paupil, Governoran’i Mahatsiatra Ambony
Nanao fanambarana io atoandro io ny Governoran’i Mahatsiatra Ambony, Razafindrafito Lova Narivelo dit Paupil taorian’ny fivorian’ny OMC notarihiny fa misy tranga Covid-19 iray mampiahiahy ao Fianarantsoa, taorian’ny fizahana nataon’ny mpitsabo.
jeudi, 26 mars 2020 13:56
Coronavirus: Misy tranga 4 vaovao, 23 no voamarina fa mitondra io tsimokaretina io eto Madagasikara
Nitondra vaovao mikasika ny fivoaran’ny valanaretina coronavirus ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle, sojaben’ny fakioltean’ny fitsaboana sady mpitondra tenin’ny Foibem-pibaikoana momba ny coronavirus androany.
mardi, 24 mars 2020 11:29
Dr Razafindranazy Jean-Jacques: Naniry ny halevina araka ny fomban-drazana aty Madagasikara
Teratany Malagasy namoy ainy noho ny coronavirus Dr Razafindranazy Jean-Jacques. Izy ihany koa no mpiasan’ny fahasalamana voalohany nindaosin’ny fahafatesana noho io valanaretina io tany Frantsa.
lundi, 23 mars 2020 19:30
Coronavirus: Ouverture officielle du « Centre opérationnel de commandement COVID-19 »
Le centre opérationnel de commandement COVID-19 basé au Mining Business Center Ivato est officiellement actif. Le Centre coordonnera les différentes mesures à appliquer afin de maîtriser la propagation du coronavirus à Madagascar.
dimanche, 22 mars 2020 10:38
Coronavirus: Mihatra ny « Fahamehana ara-pahasalamana »
Mihatra, manomboka ny 21 Martsa 2020, eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « Fahamehana ara-pahasalamana » (état d’urgence sanitaire) mandritra ny 15 andro noho ny antony ara-pahasalamana, noho ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dalàna ny asan’ireo fahefam-panjakana.
samedi, 21 mars 2020 10:04
Coronavirus : Hofoanana mandritra ny 15 andro ny fotoam-pivavahana atreham-bahoaka amin’ny Eglizy Katolika, mikatona avokoa ny Sekoly Katolika sy ny toeram-piofanana
Fanambarana avy amin’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara manoloana ny fisian’ny valan’aretina coronavirus eto amin’ny Nosy